In the third week of October, Stockholm Environment Institute Asia Center (SEI Asia) hosted and organized an online training on Low Emissions Analysis Platform (LEAP) which isapowerful, versatile software system for integrated energy planning and climate change mitigation assessment. Developed at ...
WATER AND OUR DAILY LIFE Have you ever wondered how important water is?Whenever we think about how much matter is water and where it has been being used, we could definitely find that our daily activities, from personal use to even manufacturing processes, are inseparable with water.In this article,...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ပထမဦးဆုံး သဘာဝသိပ္ပံနှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးမည့် ရေဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း "Water Studies" ဟုခေါ်သော ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်တော့မည့် အကြောင်းကို သင်သိပါသလား။ ဤသို့ဆိုလျှင် ရေဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာခြင်း "Water Studies" ဆိုတာဘာလဲ။ မည်သည့်သင်ရိုးတွေပါဝင်မလဲ ဆိုတာအခြေခံရှင...
Do you have any idea when you first hear about the water studies? I am sure that you will be willing to know what the water studies is. So, let me introduce the general term of the water studies. "Our State Counselor wants not onlyacenter of excellence of water studies in Myanmar and also she want...
ဇီဝဓာတု လည်ပတ်မှုများ ပြိုကွဲခြင်း ။ ဤစိန်ခေါ်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျော်လွှားနိုင်ပါ့မလား။ ဇီဝဓာတုလည်ပတ်မှုဆိုသည်မှာ ဂေဟစနစ်အတွင်း ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် မော်လီကျူးများ၏ရွေ့လျားမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ထိုစက်ဝန်းများတွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိများ တည်မြဲရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကာဗွန် ၊ အောက...
The symposium and technical workshop was focused on ongoing projects and international experiences of adapting the environmental flows concept to Myanmar. In the workshop, concrete options and case studies for implementing environmental flows in Myanmar were conducted. The symposium was held for two...